Ihe mgbakwunye Google AMP anaghị arụ ọrụ? - Nke a bụ ihe ngwọta sitere na amp-cloud.de - IG
extension Koodu nyocha Google AMP
extension Mepụta ihe mmịfe AMP Carousel
Google-AMP nkwụnye anaghị arụ ọrụ? -
Nyere aka na azịza ya
You na-eji otu ntanetị Google AMP , akara AMPHflix ma ọ bụ onye na-enye AMPHflix iji mepụta Peeji Mbugharị Mbugharị (AMP) maka weebụsaịtị gị, mana ibe AMP anaghị arụ ọrụ nke ọma? - N'ebe a ị ga-ahụ azịza na nkọwa banyere otu ị ga - esi nweta nsụgharị AMP ziri ezi site na enyemaka nke amp-cloud.de!
Kacha nkịtị akpata
Ebumnuche kachasị kpatara okike nke peeji AMP anaghị arụ ọrụ bụ enweghị mkpado Schema.org. Ihe ngwangwa nke Accelerated Mobile Generator bu isi na nkata schema.org / Micordata , nke a makwaara dika "ahaziri data" .
Isiokwu blog gị ma ọ bụ akụkọ akụkọ gị kwesịrị ịnwe akara ngosi dị mma dịka otu n'ime akwụkwọ ndị a na-esonụ schema.org ka ngwa mgbakwunye AMP na mkpado AMPHflix nwere ike ime ka ibe gị nwee ike ọfụma ma gụọ ndekọ data dị mkpa:
Na-adịghị amasị peeji AMP?
Ọ bụrụ na ibe AMP gị sitere na ngwa AMP ma ọ bụ mkpado AMPHflix na-efu, dịka ederede, ma ọ bụ ụfọdụ ihe anaghị egosipụta nke ọma na ibe AMP, nke a na-abụkarị n'ihi nkata schema.org na-etinyeghị nke ọma ma ọ bụ na- efu Akara nke ụfọdụ data data na ibe mbụ gị.
Na nsogbu nke ụdị njehie: Mee weebụsaịtị maka AMP
Nanị soro ndụmọdụ ndị dị n'okpuru iji bulie weebụsaịtị gị maka ndị ọrụ AMPHflix na Google plugins, ka okike nke ibe AMP gị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma dịka echiche gị.
Idozi njehie na ngosi AMP:
A na-etinye akara akara Schema.org n'ụzọ dị ka, dịka ọmụmaatụ, ọ bụghị naanị ederede ederede dị ọcha ka agbakwunyere, kamakwa ihe ndị dịka ọrụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ikwu, wdg. AMP Page enweghị ike ịkọwa ya n'ụzọ ziri ezi wee si otú a wepụta na-ekwesịghị ekwesị.
Can nwere ike dozie nke a site na itinye ntinye nke Schema.org META site na itinye naanị ihe ndị ahụ dị na ederede ederede. Ya mere, gbaa mbọ jiri akara data micro dịka akwụkwọ nke ha si dị ka nkwụnye AMP na mkpado AMPHflix nwere ike ịkọwa data nke weebụsaịtị gị iji zere njehie na ngosipụta nke ibe AMP.
Ohere AMP enweghị ederede?
N'ọnọdụ ụfọdụ, ibe AMP gị nwere ike ọ nweghị ederede ọ bụla. Ihe na - akpatakarị maka nke a bụ ihe efu Schema.org "isiokwuBody" ma ọ bụ ihe ezighi ezi nke njigide articleBody.
Ka nkwụnye AMP na mkpado AMPHTML rụọ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịchọta ederede akụkọ gị, jide n'aka na ị na-eji Mirco-Data-Tags nke ọma dịka otu n'ime akwụkwọ Schema.org edepụtara n'elu na karịsịa maka ederede ederede site na iji. mkpado "articleBody".
Checker mkpado Checker
Na ndị na-esonụ schema ule ngwá ọrụ ị nwere ike ịlele ma i n'ụzọ ziri ezi ike na schema tags ka data ndia na dị gị mkpa nwere ike gụpụta cleanly na n'ụzọ ziri ezi.
Ihe nyocha ihe nkata na- enyocha ma a na-akpado blọọgụ gị ma ọ bụ akụkọ akụkọ gị nke ọma ma nwee data bara uru nke mere ka ngwa mgbakwunye AMP na mkpado AMPHflix nwere ike rụọ ọrụ nke ọma:
Ngwá Ọrụ Nnwale Ozi Nke Google
Ihu AMP na-enweghị data ahaziri ahazi
Peeji AMP na-akwado ma na-enweghị data ahaziri ahazi? - Ọ bụrụ na akụkọ akụkọ gị ma ọ bụ isiokwu blog enweghị mkpado ọ bụla, ndị ọrụ AMPHflix na-eji mkpado HTML dị iche iche na koodu isi nke ibe edemede gị iji mepụta peeji AMP kachasị mma na nke kwesịrị ekwesị maka edemede gị.
Mepụta ibe AMP Nchekwa data & ojiji kuki akara